macOS မှာ မွနျမာ Font နဲ့ မွနျမာ Keyboard ထညျ့သှငျးနညျး (Both ZawGyi and Unicode) |
Apple / HowTo / MacBook / macOS
ကြှနျတျောဒီနပွေ့ောပွပေးသှားမှာကတော့ macOS မှာ မွနျမာဖောငျ့နဲ့ မွနျမာကီးဘုတျကို လှယျလှယျကူကူနဲ့ ထညျ့သှငျးနညျးလေးပဲဖွဈပါတယျ .. ကြှနျတျောပွောပွမယျ့ နညျးလမျးလေးအတိုငျးလိုကျလုပျဖို့ဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ MacBook မှာ macOS Catalina နဲ့အထကျ သှငျးထားဖို့လိုပါတယျ
Step 1 – အရငျဆုံးကိုယျက ZawGyi သုံးမှာလား, Unicode သုံးမှာလားဆုံးဖွတျရပါမယျ .. ပွီးရငျ System Preference ထဲကိုဝငျပါ
Step2– Language & Region ထဲဝငျပါ
Step3– Preferred Language ထဲမှာ (+) ကိုနှိပျပွီး Burmese (မွနျမာစာ) Language ကို Add လုပျလိုကျပါ .. ပွီးရငျ မွနျမာစာ ဘေးက (i) ပုံလေးကိုနှိပျပွီး Unicode သုံးမှာလား ZawGyi သုံးမှာလားရှေးပေးရပါမယျ .. Unicode သုံးမယျဆို Standard (Recommended) ကိုရှေးပေးပွီး ZawGyi သုံးမယျဆို ZawGyi ကိုရှေးပေးပါ .. ဒါဆိုရငျ Font ထညျ့ပွီးသှားပါပွီ
Step4– Language & Region ထဲက တဆငျ့ပွနျထှကျပွီး Keyboard ထဲဝငျပါ .. Keyboard ထဲရောကျရငျ အပျေါက Tab လေးတှကေနေ Input Sources ထဲဝငျပါ .. အဲ့မှာ (+) ကိုလေးနှိပျပွီး မွနျမာ Keyboard Add လိုကျပါ .. ဒါဆိုရငျ Font ရော Keyboard ပါ Add လုပျပွီးသှားပါပွီ
Step3မှာသငျဟာ Unicode ထားခဲ့တယျဆိုရငျ Keyboard ဟာ Unicode Keyboard ဖွဈနမှောဖွဈပွီး ZawGyi ရှေးခဲ့ရငျ ZawGyi Keyboard အလိုအလြောကျဖွဈနမှောဖွဈပါတယျ .. Keyboard Layout ကို ညာဖကျမှာတှမွေ့ငျရမှာဖွဈပွီး Shift Key ကိုဖိကာ Keyboard Layout အပွညျ့အစုံကိုလလေ့ာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ
Build-in ပါတဲ့ Keyboard ကိုမကွိုကျရငျ KeyMagic Keyboard ကိုထညျ့သှငျးပွီးအသုံးပွုနိုငျပါတယျ .. KeyMagic Download လုပျရနျ Link – https://keymagic.net
ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ macOS မှာ မြန်မာဖောင့်နဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ထည့်သွင်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော်ပြောပြမယ့် နည်းလမ်းလေးအတိုင်းလိုက်လုပ်ဖို့ဆိုရင် သင့်ရဲ့ MacBook မှာ macOS Catalina နဲ့အထက် သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်
Step 1 – အရင်ဆုံးကိုယ်က ZawGyi သုံးမှာလား, Unicode သုံးမှာလားဆုံးဖြတ်ရပါမယ် .. ပြီးရင် System Preference ထဲကိုဝင်ပါ
Step2– Language & Region ထဲကိုဝင်ပါ
Step3– Preferred Language ထဲမှာ (+) ကိုနှိပ်ပြီး Burmese (မြန်မာစာ) Language ကို Add လုပ်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် မြန်မာစာ ဘေးက (i) ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီး Unicode သုံးမှာလား ZawGyi သုံးမှာလားရွေးပေးရပါမယ် .. Unicode သုံးမယ်ဆို Standard (Recommended) ကိုရွေးပေးပြီး ZawGyi သုံးမယ်ဆို ZawGyi ကိုရွေးပေးပါ .. ဒါဆိုရင် Font ထည့်ပြီးသွားပါပြီ
Step4– Language & Region ထဲက တဆင့်ပြန်ထွက်ပြီး Keyboard ထဲဝင်ပါ .. Keyboard ထဲရောက်ရင် အပေါ်က Tab လေးတွေကနေ Input Sources ထဲဝင်ပါ .. အဲ့မှာ (+) ကိုလေးနှိပ်ပြီး မြန်မာ Keyboard Add လိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင် Font ရော Keyboard ပါ Add လုပ်ပြီးသွားပါပြီ
Step3မှာသင်ဟာ Unicode ထားခဲ့တယ်ဆိုရင် Keyboard ဟာ Unicode Keyboard ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီး ZawGyi ရွေးခဲ့ရင် ZawGyi Keyboard အလိုအလျောက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် .. Keyboard Layout ကို ညာဖက်မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး Shift Key ကိုဖိကာ Keyboard Layout အပြည့်အစုံကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
Build-in ပါတဲ့ Keyboard ကိုမကြိုက်ရင် KeyMagic Keyboard ကိုထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် .. KeyMagic Download လုပ်ရန် Link – https://keymagic.net